Ihe dị iche n’etiti Sideboard na buffet
site ha na 2020-12-19
The Sideboard Sideboards nwere ike ịbata n'ụdị n'ụdị yana ọtụtụ atụmatụ dị iche iche. Otu akụkụ nke oge a na-adịkarị mma ma nwee ike ịnwe ụkwụ ogologo karịa ogologo karịa akụkụ ọdịnala. Mgbe etinyere n'ime ime ụlọ, akụkụ dị n'akụkụ nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ebe ntụrụndụ. N'ihi na nke ha ...
Eziokwu banyere Kọfị Tebụl na Ihe Mere I Ji Chọrọ Otu
Anyị na-na na na-na-na-ajụjụ, na otu n’ime anyị kasị nkịtị bụ ma ị chọrọ a tebụl kọfị. Jụọ ọ bụla n'ime ime mmebe na ha ga-agwa gị, ọrụ trumps etolite ọ bụla ikpe. Gini mere iji mepụta ime ụlọ mara mma ma ọ bụrụ na ị gaghị eji ya eme ihe? Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa igosipụta otu ị ga - esi jiri s ...
Mkpa Ngwá Ọrụ Mkpa Ezinaụlọ Ọ bụla
site ha na 2020-12-18
N'ọtụtụ ụzọ, ime ụlọ ihi ụra bụ ime ụlọ kachasị mkpa n'ụlọ ọ bụla. Ọ na - enyere gị aka izu ike ma nwee ume mgbe ogologo ụbọchị gachara, imebe ime ụlọ ime ụlọ gị kwesịrị ịmebe gburugburu ebe obibi kwesịrị ekwesị nke na - akwalite ụra. Etinye ego na akụrụngwa kwesịrị ekwesị nwere ike inyere gị aka ime nke a ma kwalite ogo ...
site ha na 2020-12-01
AUG: Ndị ahịa si Arab na-elele ngwongwo anyị ma na-eleta ụlọ ọrụ anyị Ahmed na anyị kwurịtara okwu ogologo oge, na 20th AUG ọ chọrọ ịbịa leta anyị, mgbe ọ nyochachara ihe nlele anyị na ụlọ ọrụ, ọ gwara anyị na ya nwere ụfọdụ atụmatụ chọrọ ịgbanwe. , anyị kwurịtara nke anyị. engineer na-eme ka s ...
Kedu ụdị osisi bụ osisi siri ike?
site ha na 2019-06-03
Olee ụdị osisi siri ike gwakọtara osisi? Osisi siri ike bu aha nkpuru osisi di elu ma nwekwa ike, dika akpu, uyi, uyi, azu, elm, jujube, na ndi ozo.
Kedu ihe bụ Citi paini? Kedu ihe bụ isi nke Douglas fir fir?
Aha China: Douglas fir / yellow cedar English Aha: Douglas fir / d-fir Family: Pinaceae Genus: Taxodium nọ n'ihe ize ndụ ọkwa: National ọkwa nke Abụọ na-echebe osisi ọhịa (nke State Council kwadoro na August 4, 1999) Evergreen nnukwu osisi, elu ruo 100 mita elu, DBH ruo 12 mita. Ogbugbo bụ ...